Ubonakale emahhovisi eqembu lePSL obengumgadli weChiefs | isiZulu
Ubonakale emahhovisi eqembu lePSL obengumgadli weChiefs
Akuvumi akhulume ngombozo weChiefs
Useqalile ukuzilolonga ne-Kaizer Chiefs owayegijima kuChicken Inn FC
Johhanesburg – Lowo obengumgadli weKaizer Chiefs, u-Edward Manqele, angase ashaye ibuya kwiFree State Stars ngemuva kokuthi ebonakale emahhovisi e-Ea Lla Koto eBethlehem ngezikhathi zasekuseni ngoLwesibili, kubika iKick Off.
Kuyimanje uManqele akanalo iqembu asayine kulona ngemuva kokuthi ehlukane ngezindlela naMakhosi ngesizini edlule. Ngaphambilini lo mgadli owayedlalela iChippa United wayeyamaniswa nokuyodlala ezweni laseTurkey, kodwa akukho okwagcina kwenzekile njengoba manje esezama ukuzitholela ikhaya elisha lapho ezobuyisa khona umgqigqo wakhe wakudala wokushaya amagoli.
Ngokomthombo osondelene neStars, le kilabhu isikulungele ukunikeza uManqele ithuba lokuthi avuselele ikusasa lakhe ngemuva kokubhinjelwa yizinto kumaGlamour Boys.
“UManqele ulapha emahhovisini ekilabhu. Umqeqeshi ufuna ukumbukela eduzane ngaphambi kokwenza isinqumo,” kusho umthombo.
Ngesikhathi eqala ukudlalela iStars, uManqele wavalela amagoli angu-11 emidlalweni engu-21 nokwadonsa amahle eMamelodi Sundowns neChiefs. Wajoyina iSundowns ngesizini ka-2012/13, kodwa wahluleka ukwenza okwakulindelekile eChloorkop nokwaholela ekutheni abolekiswe kuMoroka Swallows, nalapho ebe nenkinga yesisindo sakhe.
Amakhosi azama inhlanhla ngalo mdlali oneminyaka engu-30 ubudala ngesikhathi emsayina ngesizini ka-2015/2016. Ngesikhathi ekulezi zinkunzi zaseSoweto, uManqele washaya igoli elilodwa nje vo.